Tansee iPhone Nyefee SMS Alternative: otú nyefee SMS si iPhone ka Computer
Banyere Tansee iPhone Nyefee SMS
Tansee iPhone Nyefee SMS bụ ihe dị mfe desktọọpụ ngwa n'ihi na ọrụ nkwado ndabere na mpaghara SMS si iPhone na kọmputa. N'okpuru ebe a bụ ya isi atụmatụ:
Ndabere SMS si iPhone na kọmputa mgbe retaining mgbakwunye, dị ka video na foto;
View SMS na .ants, .txt, .mht formats on a Windows PC;
Nkwado exporting SMS dị ka printable formats, .ants na .mht;
Nkwado iPhone, iPod aka, na iPad;
-Agba ọsọ na Windows 8/7 / XP / 2003/2000/98;
Ị nwere ike ibudata Tansee iPhone Nyefee SMS si ebe a >>
Tansee bụ ezigbo ngwá ọrụ n'ihi na ọrụ nkwado ndabere na mpaghara SMS site na iPhone na kọmputa. Na ọ na-akwado exporting SMS na otutu formats, gụnyere .ants, .txt, .mht. Otú ọ dị, o yiri ndị a formats na-adịghị otú ejikarị ma e wezụga n'ihi .txt. N'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ, mgbe transfer iPhone SMS na kọmputa na Tansee iPhone Nyefee SMS, ha ka nwere ike ele ha SMS. Na a ngwa nanị na-akwado SMS, ọbụna music, foto, na videos. Ọ bụrụ na ị chọrọ a keukwu ngwọta iPhone, ị pụrụ ịbụ mmasị na Tansee iPhone Nyefee SMS ọzọ - Wondershare TunesGo, nke ọ bụghị nanị na-akwado SMS, ma kọntaktị, music, listi ọkpụkpọ, videos, foto, iTunes U, Pọdkastị, na ndị ọzọ.
Tansee iPhone Nyefee Alternative - Wondershare TunesGo
Wondershare TunesGo - Nyefee SMS si iPhone ka Computer Mfe
Zọpụta ederede ozi, MMS & iMessages si iPhone na Mgbakwụnye dị ka a HTML / XML / TXT faịlụ;
Export SMS si iPhone na .txt, .HTML, na .xml formats maka mfe ikiri na-ebi akwụkwọ;
Detuo music na listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes Library na kọmputa;
Ndabere songs, listi ọkpụkpọ, videos, foto, na kọntaktị site na iPhone na kọmputa;
Nkwado iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 4, iPhone 4s, wdg na iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9;
Nyefee SMS si iPhone ka Computer na Tansee iPhone Nyefee SMS Alternative
Nzọụkwụ 1. Download Wondershare TunesGo na wụnye ya na gị Windows PC. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP. Mgbe ị wụnye ya, malite ya ozugbo.
Nzọụkwụ 2. Jiri iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone na PC. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ gị iPhone egosi na isi windows nke Wondershare TunesGo.
Nzọụkwụ 3. Tinye akà rà nlele igbe tupu SMS na ị na-aga nyefee gị na kọmputa. All SMS na gị iPhone na egosiri ebe a.
Nzọụkwụ 4. Pịa nhọrọ "Export ka". Wee họrọ format na ị na-aga ịzọpụta SMS dị ka. Chọta a nchekwa gị PC iji zọpụta ya.
Ọzọ Nhọrọ ndabere iPhone SMS
E wezụga Tansee iPhone Nyefee SMS na Wondershare TunesGo, ị nwekwara ike iji iTunes na kọmputa gị ma ọ bụ iCloud nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone SMS. Mgbe ị na-eji iTunes ka iCloud nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone, SMS a gụnyere na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Otú ọ dị, ị nwere ike ghara wepụ SMS si ndabere faịlụ, nke pụtara na ị ga mgbe ele ndị a ozi. Naanị mgbe i weghachi gị iPhone na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, ị ga-enwe ike ịhụ ha na gị na iPhone.
Bacup iPhone SMS na iTunes:
1. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na ẹkedori iTunes.
2. Pịa "View" menu ma họrọ "Gosi sidebar". Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ gị iPhone na NGWAỌRỤ ebe.
3. Pịa gị iPhone. Wee pịa "Summary" taabụ. Site window, ị pụrụ ịhụ nhọrọ "Back Up". Pịa ya.
Ndabere iPhone SMS na iCloud:
1. Jikọọ gị iPhone na Wi-Fi.
2. Na gị iPhone, pịa "Ntọala"> "iCloud". Pịa "Nchekwa & ndabere". Mgbe ozi "Your iPhone agakwaghị ndabere gị na kọmputa na-akpaghị aka mgbe ị na-mmekọrịta na iTunes", pịa "OK" na-enyere ndị ahụ "ndabere Ugbu a," ka "NA".
Olee otú mbupụ iPhone Ndi ana-akpo ka Gmail
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Windows na ekwentị Android ekwentị mkpanaaka na
> Resource> Nyefee> Tansee iPhone Nyefee SMS Alternative nyefee SMS si iPhone ka Computer